Toekarena amin'ny lalao finday maimaim-poana | Martech Zone
Talata, Febroary 21, 2012 Talata, Febroary 21, 2012 Adam Small
Ny orinasa dia mikasa ny hampivelatra ny interface programa sy ny fampiharana finday izay mankasitraka ny serivisin'izy ireo; na izany aza, ny fampiharana fialamboly maimaim-poana dia matetika no odian-tsy hita ho fomba azo atao.
Ny maodelim-pandraharahana freemium dia mandray an-tanana - tombanana 65% amin'ny vola azo avy amin'ny fampiharana 100 ambony indrindra ao amin'ny App Store, ary tombanana 72% ny vola miditra amin'ny App Store dia avy amin'ny lalao finday freemium. Ny fividianana lalao toy ny fiainana fanampiny, hery manokana, entana virtoaly ary personalization no mitarika ny vola miditra. From GetElastic
Karazan-kilalao inona no mety hananan'ny orinasanao hampiala voly sy hampiasana mpampiasa finday, na dia mamela anao hiresaka amin'izy ireo amin'ny fomba mahomby momba ny vokatrao sy ny serivisinao aza ianao?